Brbb / myanmar_test_scraper
City of Yangon data
Last run failed 2022-05-15 with status code 255.
Download table (as CSV) Download SQLite database (674 MB) Use the API
rows 10 / 174554
မြို့တော်ပြည်သူ့နီတိပြိုင်ပွဲ ဆုရရှိသူများအား ဆုများပေးအပ်ချီးမြှင့် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက ကြီးမှူးကျင်းပသည့် မြို့တော်ပြည်သူ့နီတိပြိုင်ပွဲ ဆုချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို မေလ ၁၂ရက်နေ့၊ နံနက်(၉)နာရီခွဲတွင် ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမရှိ ခန်းမကြီး၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပြိုင်ပွဲတွင် အခြေခံပညာကျောင်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများနှင့် ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းမှ မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းအဆင့်တို့မှ ကျောင်းသား ကျောင်းသူ (၁၄၆)ဦး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပြီး စုစုပေါင်း ကျောင်းသား ကျောင်းသူ (၄၈)ဦး ဆုရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဆုရရှိသူများမှာ မူလတန်းအဆင့်၌ ပထမဆုရ အထက(၁) ဒဂုံ စတုတ္ထတန်းမှ ကျောင်းသူ မဆုမြတ်ရတနာ၊ ဒုတိယဆုရ အမက(၂၈) လှိုင်သာယာ စတုတ္ထတန်းမှ ကျောင်းသား မောင်ကောင်းဆက်သန့်၊ တတိယဆုရ အမက(၂)တာမွေ ဒုတိယတန်းမှ ကျောင်းသူ မကြယ်စင်လင်း နှင့် အထူးဆု (၁၂)ဦး၊ အလယ်တန်းအဆင့်၌ ပထမဆုရ International School သတ္တမတန်းမှ ကျောင်းသူ မဟန်စုယဉ်၊ ဒုတိယဆုရ အထက(၂)အင်းစိန် ဆဋ္ဌမတန်းမှ ကျောင်းသူ မဖြိုးပြည့်ပြည့်ကျော်၊ တတိယဆုရ TTC ကမာရွတ် ဆဋ္ဌမတန်းမှ ကျောင်းသူ မဆုလာဘ်ရတနာနှင့် အထူးဆု (၁၇)ဦး၊ အထက်တန်းအဆင့်၌ ပထမဆုရ အထက(၂) ကမာရွတ် န၀မတန်းမှ ကျောင်းသူ မမေမြတ်မိုး၊ ဒုတိယ ဆုရ အထက(၂) စမ်းချောင်း န၀မတန်းမှ ကျောင်းသူ မစံထိပ်ထားလှိုင်၊ တတိယဆုရ သုခအလင်း (မြောက်ဒဂုံ) ဒသမတန်းမှ ကျောင်းသူ မနေဦးအိ​​န္ဒြေ နှင့် အထူးဆု (၁၀)ဦး တို့အား ဆုများပေးအပ်ချီးမြှင့်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
(က) အစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက လုပ်သက်အနည်းဆုံး (၂ဝ)နှစ်ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး အမှန်တကယ်နေထိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာဌာနအကြီးအကဲ၏ ထောက်ခံချက်ပါရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။ (ခ) အခြားလျှောက်ထားမည့်သူများအနေဖြင့် နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကိုင်ဆောင်သူ အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရပါမည်။ (ဂ) လျှောက်ထားရမည့်သူ၏ မိသားစုလစဉ်ဝင်ငွေသည် အနည်းဆုံးကျပ်သုံးသိန်းရှိရပါမည်။ (ဃ) တိုက်ခန်းဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူများသည် (၅)နှစ်အတွင်း ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းမပြုလုပ်ရပါ။ (င) တိုက်ခန်းဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူများသည် တိုက်ခန်းတန်ဖိုး၏ ၃ဝ% အား ဝယ်ယူခွင့်ရရှိသည့်နေ့မှ (၂)လအတွင်း အပြီးပေးချေရပါမည်။ (စ) သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ငွေစတင်ပေးသွင်းမှုမရှိသည့်အခန်းများ၏ ဝယ်ယူခွင့်အား ပယ်ဖျက်၍ အရန်စာရင်းကြီးစဉ်အရ ဆက်လက်ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ (ဆ) လျှောက်လွှာဝယ်ယူသူနှင့် လျှောက်လွှာတင်သွင်းသူသည် တစ်ဦးတည်းဖြစ်ရပါမည်။
အုတ်များရောင်းချနေကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မှော်ဘီအုတ်စက်ရုံမှ ထုတ်လုပ်သော အရည် အသွေးမြင့်စံချိန်မီ ( 9" x 4" x 3" )၁၀ပေါက်စက်ကြီးအုတ်များကို စက်ရုံအထိုင်စျေး အုတ်တစ်ချပ် ၁၀၀ ကျပ်နှုန်းဖြင့် မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း	-	၀၉ ၇၈၄၅၅၄၉၃၃၊ ၀၉ ၃၀၁၀၀၇၇၀၊ ၀၉ ၇၉၈၃၈၀၄၁၄၊ ၀၉ ၇၉၈၂၆၁၀၉၉ ထုတ်လုပ်ရေးဌာန ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အသိပေးကြေညာချက် ၁။	ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး နယ်နိမိတ်အတွင်း ဆောက်လုပ်မည့် အဆောက်အအုံများ Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် စည်းကမ်းတကျ ဆောင်ရွက်မှုရှိစေရန်၊ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အဆောက်အဦများ၊ လမ်းများ၊ ရေမြောင်းများ ပလက်ဖောင်းများ ထိခိုက်မှုမရှိအောင် ဆောင်ရွက်စေရန်နှင့် အဆိုပါ ဆောင်ရွက်ချက်များကို တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှုရှိစေရန် အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေး ပညာရှင်အဖွဲ့မှ ထောက်ခံချက် ပေးထားသည့် Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော ကုမ္ပဏီ(၄၃)ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးခဲ့၍ ကြေညာခဲ့ပြီး ယခုထပ်မံ၍ ထောက်ခံချက်ရရှိသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ကုမ္ပဏီ(၇)ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားပြီး ဖြစ်ပါသည်- (က) Myanmar D & C Engineering Company No.E3B, Hlaing Yadanar Villa, Thazin St, Hlaing Township, Yangon. 09-421075333, 09-250271615 E-mail: dinhnguyenpe@gmail.com, pyaephyokywe7@gmail.com. (ခ) ရွှေအုတ်ခဲ ဆောက်လုပ်ရေး အမှတ်(၄၄)၊ ဆောင်းနှင်းသဇင်လမ်း၊ FMI City၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။09-5045478, 09-49229508 (ဂ) CROWN ADVANCED CONSTRUCTION COMPANY LIMITED အမှတ်(၄၅)၊ ဦးထွန်းညိုလမ်း၊ စက်မှုဇုံ(၃)၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်။ 01-618601, 01-618600,09-5061333FAX: 01-618009 (ဃ) BOSTOM Co., Ltd. တိုက်(ဘီ)၊အခန်း(၁၀၀၅)၊ ရွှေဟင်္သာကွန်ဒို၊ ရွှေဟင်္သာလမ်းနှင့် ပြည်လမ်းထောင့်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။09-8300414, 09-785527994 (င) Asia Express (YGN) Bored & Press Piling Co., Ltd. အမှတ်(၂၇၇)၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း နှင့် ၃၈လမ်းထောင့်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။01-291106, 09-8601823, 09-795326942 (စ) DTCN HOLDING (MYANMAR) CO., LTD. အမှတ်(၃၂)၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး(၅)လမ်း၊ အမှုထမ်းရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မြို့နယ်။09-254905121, 09-791658016 (ဆ) LUCKY CONCRETE PRECAST PRODUCT MANUFACTURING CO., LTD. No.217/222, U Tun Nyo Street, Industry Zone(1), Dagon Seikan Township.01-593725, 09-973659312E-mail: luckyconcrete@gmail.com ၂။	(၁.၁.၂၀၁၆)ရက်နေ့မှစ၍ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြရာတွင် ဤကော်မတီမှ အသိအမှတ်ပြု Pile ရိုက်ခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူထားသည့် ကုမ္ပဏီများကိုသာ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ၃။	သို့ဖြစ်ပါ၍ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြမည့်သူများ သိရှိနိုင်ပါရန်နှင့် Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း လိုင်စင်လျှောက်ထားလိုသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)သို့ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေး ပညာရှင်အဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက် ပူးတွဲတင်ပြ၍ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ ၄။	အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၊ (၁၀)ထပ်ရုံးသို့ ရုံးချိန်အတွင်းလာရောက်၍ ကိုယ်တိုင် သော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်း-၀၁-၃၇၄၀၇၇၊ ၀၁-၃၇၄၀၅၅ သို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ ဌာနမှူး၊အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)	ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
(က) Myanmar D & C Engineering Company No.E3B, Hlaing Yadanar Villa, Thazin St, Hlaing Township, Yangon. 09-421075333, 09-250271615 E-mail: dinhnguyenpe@gmail.com, pyaephyokywe7@gmail.com. (ခ) ရွှေအုတ်ခဲ ဆောက်လုပ်ရေး အမှတ်(၄၄)၊ ဆောင်းနှင်းသဇင်လမ်း၊ FMI City၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။09-5045478, 09-49229508 (ဂ) CROWN ADVANCED CONSTRUCTION COMPANY LIMITED အမှတ်(၄၅)၊ ဦးထွန်းညိုလမ်း၊ စက်မှုဇုံ(၃)၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်။ 01-618601, 01-618600,09-5061333FAX: 01-618009 (ဃ) BOSTOM Co., Ltd. တိုက်(ဘီ)၊အခန်း(၁၀၀၅)၊ ရွှေဟင်္သာကွန်ဒို၊ ရွှေဟင်္သာလမ်းနှင့် ပြည်လမ်းထောင့်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။09-8300414, 09-785527994 (င) Asia Express (YGN) Bored & Press Piling Co., Ltd. အမှတ်(၂၇၇)၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း နှင့် ၃၈လမ်းထောင့်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။01-291106, 09-8601823, 09-795326942 (စ) DTCN HOLDING (MYANMAR) CO., LTD. အမှတ်(၃၂)၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး(၅)လမ်း၊ အမှုထမ်းရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မြို့နယ်။09-254905121, 09-791658016 (ဆ) LUCKY CONCRETE PRECAST PRODUCT MANUFACTURING CO., LTD. No.217/222, U Tun Nyo Street, Industry Zone(1), Dagon Seikan Township.01-593725, 09-973659312E-mail: luckyconcrete@gmail.com
The Republic of the Union of Myanmar Yangon Region Government Yangon City Development Committee Invitation for Bids Date 3-1-2017 Name of Project:	Installation, Maintenance and Operation of Street Furniture Items in the City of Yangon 1.	YCDC invites bids from the interested bidders for the Installation , Maintenance and Operation of Street Furniture Items and the grant of an exclusive right to advertise on the street furniture items in the City of Yangon. 2.	The interested bidders may obtain further information about this invitation for bids from the following office during office hours: Engineering Department (Road and Bridge), Yangon City Development Committee, City Hall , Yangon. Telephone o. 09-43193314 3.	A complete set of bidding Documents may be purchased upon submission ofawritten application to the above address and upon payment ofanon-refundable fee of Kyat 50000 (fifty thousand kyats only) to YCDC. 4.	Bids documents shall be delivered in person to the above office on or before 15 hrs. on 17th February 2017. Electronic bidding will not be permitted. Any bid submitted after the designated date and time will be rejected. 5.	All Bids must be accompanied by bid security (tender guarantee) in the amount of Kyat 300,000,000 or USD 250000 issued by local bank as described in the bidding documents. 6.	Bids will be opened inasession to be held at the office of Yangon City Development Committee in the presence of representatives of the bidders on the date and time as may be notified to the bidders. Yangon City Development Committee
အသိပေးကြေညာချက် ၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ကြီးကြပ်မှုဖြင့် အောင်မြင်တိုးတက်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်မှဆောင်ရွက်သည့် ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ (၄၂)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်မင်းရောင်လမ်းနှင့်မင်းရဲကျော်စွာလမ်းထောင့်၊ ဗိုလ်မင်းရောင်တန်ဖိုးမျှတအိမ်ရာစီမံကိန်းရှိ တိုက်ခန်းများအား ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ ပထမပတ်မှစ၍ တိုက်ခန်းဝယ်ယူထားသူများထံသို့ အခန်းအပ်နှံပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၂။ သို့ဖြစ်ပါ၍ တိုက်ခန်းဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူများမှ တိုက်ခန်းတန်ဖိုးငွေအကျေပေးသွင်းပြီးသူများအား ဌာနမှ အဆောက်အအုံနေထိုင်ခွင့်စာချုပ်များ ချုပ်ဆိုထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)သို့ လာရောက်ဆက်သွယ်ပါရန်နှင့် တိုက်ခန်းဖိုးငွေပေးချေရန် ကျန်သူများအနေဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားရန် အသိပေးအပ်ပါသည်- (က) တိုက်ခန်းဖိုးငွေပေးချေရန် ကျန်သူများအနေဖြင့် ပေးချေရန်ကျန်ငွေများအားပေးသွင်းရန်။ (ခ) ဘဏ်ချေးငွေစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူထားသူများအနေဖြင့် ဘဏ်သို့ပေးသွင်းရမည့်ငွေများအား ပေးသွင်းရန်နှင့် ဘဏ်ထောက်ခံချက်နှင့်အတူ တင်ပြဆောင်ရွက်ရန်။ ဌာနမှူး၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ) ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
REQUEST FOR INFORMATION REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR YANGON CITY WATER SUPPLY IMPROVEMENT PROJECT SUPPLY AND DELIVERY OF LIQUID SODIUM HYPOCHLORITE The Water and Sanitation Department of the Yangon City Development Committee (YCDC) is upgrading its potable water supply system by constructinganew water treatment plant and implementing disinfection facilities at existing water supply facilities throughout the city. YCDC is exploringanumber of disinfection options one of which is the use of liquid sodium hypochlorite. There is no sodium hypochlorite manufacturing facility in Myanmar. YCDC would have to source the required product from international suppliers and determine how to transport and arrange deliveries to water supply facilities in Yangon City. Before proceeding with an international competitive bid, YCDC would like to confirm technical and logistic requirements in order to develop qualification criteria and tender documents. General requirements are expected to be as follows: Liquid sodium hypochlorite (NaOCl):12.5 percent available chlorine, capable of meeting American Water Works Standard B-300-99 or equivalent standard for potable water supply. TSS <= 0.15 % by weight, free alkali as NaOH by weight 0.1% to 1.0%. Chlorate concentration less than 2.5 g/L upon delivery. The supplier shall be responsible for transferring the liquid sodium hypochlorite into storage tanks at the delivery sites. Estimated annual requirement: - 8,760 m3 Delivery amount and schedule: - 120 m3 every5days Delivery locations in Yangon: Location Storage capacity Minimum delivery requirement Lagunbyin WTP3x 30 m3 23 m3/5days Nyaunghnapin WTP No.13x 30 m3 26 m3/5days Nyaunghnapin WTP No.23x 30 m3 26 m3/5days Hlawga No.1 Pump Station3x 30 m3 29 m3/5days Yegu Pump Station3x 20 m3 16 m3/5days Delivery quantities and schedules may vary depending on actual water production and demands. Liquid sodium hypochlorite consumption at each location is an estimate only and YCDC would not be bound by these amounts in its contract with the supplier. Interested suppliers should provide the following information: Manufacturers name and country of origin. Location of production facility. Production capacity. Manufacturing method and applicable standards. Experience with bulk supply and delivery of liquid sodium hypochlorite for potable water supply or wastewater treatment. Typical commercial terms used on similar supply and delivery contracts. Method for placing an order: fixed schedule and fixed amount vs delivery ofavarying amount within 72 hours after telephone notification by YCDC. Product specifications: available chlorine g/l (minimum and maximum). Manufacturer’s certified laboratory report showing: total suspended solids, excess sodium hydroxide content in g/l, iron mg/l, copper mg/l, and nickel mg/l. Proposed shipping method to Yangon: by land (containers on flatbed truck vs tanker truck) or containers by air, capacity of tanker trucks or containers, number of trucks and containers. Proposed Incoterms for shipping e.g. C.I.P. Description of customs clearance procedures and timeframes for land transportation. Description of tanker truck unloading procedures and equipment for unloading directly into the liquid storage tanks and feeding facilities. Description of container delivery procedures and unloading equipment: indicate the size and number of containers per truck. Indicate how the containers will be unloaded and how they should be stored by YCDC. Describe how the empty containers will be managed by the supplier (loading and transporting back to the manufacturer or toarecycling facility). Estimated shipment delivery times from the time the product is manufactured to delivery at site including any time spent in clearing customs. Methods for acceptance sampling and testing prior to unloading. Description of delivery safety equipment, safety training and emergency response plans for spills and accidents. Availability of staff for engineering and technical assistance with the application of its product, and disposal and handing of residues and sludge produced by the application of liquid sodium hypochlorite. This isarequest for information only and no contract award will be made asaresult of this process. YCDC will proceed with an International Competitive Bid for the procurement of goods fora1 year contract when there is adequate information to do so. It is expected that hypochlorination facilities would be ready to start operations in January 2019. Further information can be obtained at the address below during office hours from Monday to Friday between 09:30 am to 04:30pm. Information should be delivered inawritten form to the address below in person, by mail or email by October 15 2016 at 12 noon Yangon time. Mr. MyintOo Head of Department Engineering Department (Water and Sanitation) Yangon City Development Committee No. 390, 12-Storey New Building, Merchant Road, Botahtaung Township, Yangon, Myanmar +95-977-8940593 +95-977-8940595 ycdcws@gmail.com
Location Storage capacity Minimum delivery requirement Lagunbyin WTP3x 30 m3 23 m3/5days Nyaunghnapin WTP No.13x 30 m3 26 m3/5days Nyaunghnapin WTP No.23x 30 m3 26 m3/5days Hlawga No.1 Pump Station3x 30 m3 29 m3/5days Yegu Pump Station3x 20 m3 16 m3/5days
အသိပေးကြေညာချက် ၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆောက်လုပ်မည့် အဆောက်အအုံများ Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် စည်းကမ်းတကျဆောင်ရွက်မှုရှိစေရန်၊ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အဆောက်အဦများ၊ လမ်းများ၊ ရေမြောင်းများ ပလက်ဖောင်းများ ထိခိုက်မှုမရှိအောင် ဆောင်ရွက်စေရန်နှင့် အဆိုပါဆောင်ရွက်ချက်များကို တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှုရှိစေရန် အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့မှ ထောက်ခံချက်ပေးထားသည့် Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော ကုမ္ပဏီ(၂၅)ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးခဲ့၍ ကြေညာခဲ့ပြီး ယခုထပ်မံ၍ထောက်ခံချက်ရရှိသည့် အောက်ဖော်ပြပါကုမ္ပဏီ(၁၈)ခုအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါသည်- (က) ဟိန်းလင်းခန့်ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမှတ်(၁၂)၊ (၄)လွှာ၊ ဖျာပုံလမ်း၊ကျွန်းတောအလယ်ရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။ 01-514454, 09-5020218 (ခ) အရုဏ်ဦးဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် အမှတ်(၆၀၈/ဘီ၊ ၆၀၉/အေ)၊ ယုဇနတာဝါ၊ ရွှေဂုံတိုင်။ 01-558294,01- 558321,01-555269, E-mail:ahyoneoo@myanmar.com.mm, ahyoneoo1985@gmail.com (ဂ) Myanmar Zhi De GeotecHnical ENGINEERING Services Co.,Ltd. အမှတ်(၂၂/အေ)၊ ရွာမကျောင်းလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်။ 09-43194928 (ဃ) Myat Mi Ba Company Limited. အမှတ်(၁၁၁)၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်။ 95-1-2305385, 516212, 682710,706883, 09-5124590, E-mail:headoffice@myatmiba.com (င) Capital Leasing Ltd. အမှတ်(၄၀၃/အေ)၊ C(8)၊ ယောမင်းကြီးလမ်း၊ ယောမင်းကြီးရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့နယ်။ 09-977921662 (စ) Delight Piling Co.,Ltd. အမှတ်(၀၀၈)၊ (ဘီ)ဘလောက်၊ နှင်းဆီလမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ Highway Complex, ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ 01-523836, 01-532028, E-mail:info@delightengg.com, delightconstruction2009@gmail.com. (ဆ) Taw Win Family Construction Co.,Ltd. အမှတ်(၄၅)၊တော်ဝင်စင်တာ၊ပြည်လမ်း၊ ပြည်အနောက်ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့နယ်. 01-8600034,01-8600035,01-8600036,01-8600037 ,E-mail: tawwinfamily09@gmail.com (ဇ) GREAT MYANMAR SERVICES အမှတ်(၄၆၉)၊မန္တလေးလမ်း၊စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ် 09-5157878,09-73051898, 09-794116313 (စျ) GEO FOUNDATIONS & CONSTRUCTION CO.,LTD. အမှတ်(၁၉၂/အေ)၊သစ္စာလမ်း၊(၁၂ )ရပ်ကွက်၊ရန်ကင်းမြို့နယ်, 09-440472526,09-421011615,01-2336387 (ည) Mate Swe Taw Concrete Pole, Construction & Engineering Co.,Ltd. အမှတ်(၇၄)၊တပင်ရွှေထီးလမ်း၊(၁)ရပ်ကွက်၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ 01-686784, 09-5129282, 09-5133280 import.mst@gmail.com.၊ uthanwinmst@gmail.com. (ဋ) GEOLAB(MYANMAR) CO.,LTD. အမှတ်(၄၁၃/၄၁၄)၊အောင်သစ္စာလမ်း၊ (၄၈)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း) မြို့နယ်။ 5077153, 09-8625068, 09-5003281 . E-mail: csc1999@gmail.com, geolab.myanmar@gmail.com (ဌ) GD Myanmar Co.,Ltd. အမှတ်(၃၂)၊ပိတောက်ရိပ်သာ(၁)လမ်း၊ မင်္ဂလာဒုံဥယျာဉ်မြို့တော်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် 09-254233334 E-mail: gdmyanmar.co@gmail.com (ဍ) Myanmar Zhong Fei Company Limited အမှတ်(၁/၈)၊ဓမ္မာရုံလမ်း၊ဘောက်ထော်ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ် , 09-780509511, 09-250434558, 09-250980869, 09453403524 (ဎ) CJ PILING (MYANMAR) CO.,LTD. အမှတ်(၅၇-၅၈)၊ အခန်း(၄၀၂)၊ခေမာသီလမ်း၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။ 09-420093994,09-5114875, E-mail: zawaung238@gmail.com, lsdg172@gmail.com (ဏ) Dragon Power Engineering Co.,Ltd. အမှတ်(၂၀၅)၊အနော်ရထာလမ်း၊ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။ 01-9648086,09-428024002, 09-5019469, E-mail: kyawswar.min@umgroups.com (တ) K B G Piling & Construction Co.,Ltd. အမှတ်(၁၀၁၈)၊သီရိရိပ်သာကွန်ဒို၊ (၉)မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။ 09-420119207,09-425284771 (ထ) Tek Bumi Co.,Ltd. အမှတ်(၂၁၂/၂၁၅)၊ Ground Floor စံပယ်မာဃလမ်း၊ ဟံသာရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။ 09-5153441, 01-512695 (ဒ) Asia Geotechnique International Limited အမှတ်(၄၃/W)၊ သီရိမွန်(၈)လမ်း၊ သီရိမွန်အိမ်ရာ၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်။ 01-681771, 01-681863, 09-797719672, 09-973078612 ၂။ (၁.၁.၂၀၁၆)ရက်နေ့မှစ၍ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြရာတွင် ဤကော်မတီမှ အသိအမှတ်ပြု Pile ရိုက်ခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူထားသည့် ကုမ္ပဏီများကိုသာလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့်တင်ပြမည့်သူများ သိရှိနိုင်ပါရန်နှင့် Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း လိုင်စင်လျှောက်ထားလိုသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)သို့ အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးပညာရှင်အဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်ပူးတွဲတင်ပြ၍ လျှောက်ထား နိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ ၄။	အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၊ (၁၀)ထပ်ရုံး သို့ ရုံးချိန်အတွင်းလာရောက်၍ ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်း-၀၁-၃၇၄၀၇၇၊ ၀၁-၃၇၄၀၅၅ သို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ ဌာနမှူး၊အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ) ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
Average successful run time:9minutes
Total disk space used: 674 MB
Auto ran revision 924768dc and failed 2022-05-15 .
Auto ran revision 924768dc and failed 2022-05-14 .
Auto ran revision 924768dc and failed 2022-05-13 .
Auto ran revision 924768dc and failed 2022-05-12 .
Auto ran revision 924768dc and failed 2022-05-11 .
Created on morph.io 2017-08-03
myanmar_test_scraper / scraper.js